गृहपृष्ठ » अमेरिका » अमेरिकामा अचानक आयो बादलको सुनामी, मानिसहरुलाई अब बाँचिन्छ भन्ने लागेन [ भिडियोसहित ]
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियो सायद तपाईले साइन्स फिक्शन फिल्ममा मात्र देख्नु भएको होला । यो भिडियो हेरेर सबै छक्क परिरहेका छन् ।
हालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । जसलाई देखेर मानिसहरु आत्तिएका छन् । भिडियोमा मानिसको घरको पछाडि सुनामी छाल जस्तो अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
तर यो पानीको छाल नभएर बादलहरूका् सुनामी हो । हेर्दा यो सामान्य छैन, सुनामी जस्तो देखिन्छ। अहिले नै पानीले घरहरु लपेटेर लैजान्छ की जस्तो देखिन्छ । तर यी बादल हुन्, पानी होइनन्। यो अनौठो दृश्य देखेर सबै छक्क पर्छन् ।
हामी तपाईंलाई बताउछौं कि बादलको यो लहरलाई आर्कस क्लाउड फर्मेशन भनिन्छ। तिनीहरूलाई सामान्य भाषामा रोल क्लाउड पनि भनिन्छ।
यो भिडियो पहिलो पटक Reddit मा अपलोड गरिएको थियो। एक Reddit प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, मलाई सुनामी जस्तो लागेको थियो, मैले यस्तो बादल पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ।
केही मानिसहरूले भने कि आर्कस क्लाउडहरू उनीहरूको सपनामा आएको सर्वनाशको डरलाग्दो दृश्य जस्तै थियो । त्यसैले कसैले यो घटना क्रिस्टोफर नोलनको साइन्स फिक्शन फिल्म ‘इन्टरस्टेलर’ को दृश्यसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेका छन् ।
Tsunami-like clouds. Ain’t Nature grand? (via reddit) pic.twitter.com/YmfTr7MDI9
— Liberty 💚🥃 (@LibertyRPF) June 16, 2022
यो भिडियो सिनसिनाटी, ओहायो नजिकैको हो । यो महिना सिनसिनाटीले भारी वर्षाको सामना गर्यो। पानी परेपछि पुरै क्षेत्र हावाहुरी बादलले ढाकेको थियो । आँधीले सहरभरका घर र रुखमा क्षति पुर्याएको थियो ।
सहरका पावर ग्रिड र पोलमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो । परबाट हेर्दा आँधी नै देखिएपछि यो पटक भने मानिसहरुले अब बाँचिन्छ भन्ने सोच्नै सकेनन् ।
आर्कस बादल के हो ?
आर्कस बादलहरू तल्लो तहमा आइपुग्ने अति बाक्लो बादल हो । यो लामो र निक्कै बाक्लो हुन्छ । जुन शक्तिशाली गर्जनका कारण माथी आकाशमा बन्छ । र दवाले तल झर्छ ।
यस्तो बादल कहिलेकाही मात्र पृथ्वीमा झर्छ । यो बादल प्रायः कम्युलोनिम्बस बादलहरू मुनि देखिन्छन्। शेल्फ क्लाउडहरू आँधीबेहरी क्लाउडसँग जोडिएका हुन्छन्, जबकि रोल क्लाउडहरू आँधीको बादलबाट अलग तेर्सो स्तम्भ बनाउँछन्।
आर्कस बादल कसरी बन्छ ?
जब क्युमुलोनिम्बस क्लाउडबाट चिसो डाउनड्राफ्टहरू जमिनमा पुग्छन्, चिसो हावा द्रुत रूपमा जमिनमा फैलिन्छ। यसले अवस्थित तातो आर्द्र हावालाई माथि धकेल्छ। यो हावा बढ्दै जाँदा, पानीको बाफ सघन हुन्छ र आर्कस क्लाउडको ढाँचामा परिणत हुन्छ। लहर जस्तो बादलहरू विशेष गरी आँधी रुप लिएको देखिन्छ ।
अगस्ट १८, २०१८ मा दक्षिणपश्चिमी फ्रान्सको गुजन मेस्ट्रेसको अर्काकोन बेसिनमा आर्कस बादलहरू देखिएका थिए। (तस्वीरः एएफपी)
मौसम कार्यालयका अनुसार, आर्कस क्लाउडहरू ६५०० फिटको उचाइमा पुग्न सक्छ र सामान्यतया तेर्सो रूपमा घुम्ने स्तम्भहरूको रूपमा देखा पर्दछ।
यसरी नै पुरुषलाई जताततै दोष लगाइन्छ – यो भिडियो हेर्नुहोस्